Microsoft Office, otu n'ime ngwa izizi etinyere maka Apple's Touch Bar | Esi m mac
Microsoft Office, otu n’ime ngwa izizi emejuputara maka Apple's Touch Bar
Ọnye na -bụ Javier Porcar? | | MacOS Sierra, Ngwa ndị ọzọ maka Mac, ọtụtụ
Anyị na-amalite ịmara na ndị mmepe ejirila uru ọ bụla gbaa ọsọ iji gbanwee ngwa ha na mgbanwe nke Apple gosipụtara n'ehihie ụnyaahụ. N'ezie, anyị na-ekwu maka ogwe ọrụ ọhụụ Aka Ogwe.
Na nkenke, ndị unu banyere n'isiokwu a na-amaghị banyere ọrụ a, na-agwa unu na Apple mepụtala ogwe ọrụ maka ngwa anyị na-eji na Macbook Pro ọhụrụ ya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe dị mfe dị otú ahụ bụ na a na-adọta akara ngosi kachasị eji n'oge niile, si otú a na-enweta nnukwu arụpụta.
Ma na-enweghị ịhụ ya n'ụzọ zuru ezu, anyị agaghị aghọta ọrụ ya. Microsoft emeela kpọmkwem maka kọmputa na Touch Bar, ọnọdụ Ọnọdụ Mgbado Anya (ma ọ bụ ọnọdụ na-enweghị ihe ndọpụ uche), maka Okwu Microsoft. Ọ na-enye ohere ịrụ ọrụ na ọnọdụ ihuenyo zuru oke, na-enweghị ụdị akara ngosi, mmanya, wdg. Ngwa ahụ debere Ogwe Aka na ihe ga-abụ mmemme kachasị amasị mmemme ahụ. Nke ahụ bụ ịsị, Anyị nwere ike ịhụ na ọhụụ ọhụrụ Apple akara ngosi nke: obi ike, italic, mata, tab, nọmba, na ndị ọzọ.
Banyere uru ndị anyị ga-ahụ Ike, ndị a lekwasịrị anya dna-ebugharị ihe eserese. Anyị nwere bọtịnụ Megharia ihe, nke ga - enyere anyị aka iji anya nke uche hụ ihe nkiri slide dị iche iche ka anyị wee nwee ike ibugharị ihe. Ọzọkwa ịpịgharịa mkpịsị aka gị na ogwe ahụ, anyị ga-atụgharị ihe ahụ n'onwe ya ruo mgbe anyị ga-achọta akụkụ a chọrọ.
Ọrụ ndị anyị nwere ike ịrụ Metụ mmanya na Excel, gbado anya na otu abuo: n'otu aka intuitive gbalịa inye gị usoro ịchọrọ n'etiti ọtụtụ nhọrọ na ngwa ngwa anyi na-enye gị ohere ịhọrọ oke iji mee usoro achọrọ na obere sekọnd. N'aka nke ọzọ, ọ na-enye gị ohere ịnweta agba dị iche iche ma ọ bụ eserese.
N'ikpeazụ, Echiche. Echere m na ọ ga-abụ ihe kachasị baa uru nke atọ ahụ, nwere ọrụ doro anya na ugboro ugboro. N'okwu a, ojiji ya ga-adị mkpa karịa. Site na oge mbụ, mgbe anyị na-ede ozi email, na-atụ aro faịlụ ndị a jiri oge na-adịbeghị anya, na-enye anyị ohere itinye ha.
Ọ bụrụ na nke a bụ ihe Microsoft nwere ike ime na ngwugwu ha nke dị ọtụtụ, achọrọ m ịma ihe ọrụ anyị nwere ike ime Ana m arụ ọrụ site na Ogwe Aka. Anyị ga-amata nke a n’oge na - abịanụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Microsoft Office, otu n’ime ngwa izizi emejuputara maka Apple's Touch Bar
Craig Federighi: MacBook Pro Touch Bar nwere "ọtụtụ ikike" maka ndị mmepe
Ihe ọhụrụ MacBook Pro na ihe nkwụnye ị ga-achọ